“Waxaan ardayda Jaamacadda Burco ka tacsiyadaynayaa dilkii Ugbaad.” M Biixi | Berberanews.com
Home WARARKA “Waxaan ardayda Jaamacadda Burco ka tacsiyadaynayaa dilkii Ugbaad.” M Biixi
Hargeysa (Berberanews)- Madaxwaynaha Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi, ayaa shacabka Somaliland ka tacsiyeeyay dilkii iyo Kufsigii loo geystay Ugbaad Cali, gaar ahaan ardayda Jaamacadda Burco oo ay ka mid ahayd.
Madaxweyne Biixi oo safar shaqo ku jooga magaalada Burco ee xarunta Gobolka Togdheer oo ka oo Ka qayb galay xaflada qalin jabinta Dufcadii 10.aad ee Jaamacada Burco oo ay dhigan jirtay Marxuumad Ugbaad.
” Waxaan shacabka Somaliland ka tacsiyadeynayaa , gaar ahaan ardeyda maanta ka qalinjabinaysa jaamacadda Burco , gaar ahaan haweenka , dilkii foosha xumaa ee lagula kacay Ugbaad Cali oo maanta kamid ahaan lahayd ardeyda qalinjabinaysa jaamacadda.
Waxaanan farayaa hay’addaha garsoorka in hawsha sida ugu dhaqsaha badan loo dadajiyo , balana waxaan ku qaadaya inaan hore ka fuliyo marka uu isoo gaadho ”
qalinjebinta jamaacadda Burco
Previous articleSOLJA oo cambaaraysay xadhiga laba weriye
Next articleFannaanadii Saynab Xaaji Cali Baxsan oo geeriyootay